Soomaali sharciga lagala noqday waxyaabo ay facebook ku qoreen dartiis: waraysi - NorSom News
Soomaali sharciga lagala noqday waxyaabo ay facebook ku qoreen dartiis: waraysi
Ilaa hada dhowr qof oo soomaali ah ayaa lasoo sheegayaa in sharciga lagala noqday ama la siiyay digniino ku saabsan in sharciga lagala noqon karo waxyaabo ay facebook kusoo qoreen darteed. Dadkan ayaa waxyaalaha lagu haysto waxaa kamid ah in ay facebooga kusoo galaan magac ka duwan kan wadanka uga diiwaan gashan ama ay isku dhiibeen markii hore. Waxaa kaloo lasoo sheegayaa in dadka qaar kamid ah oo isku dhiibay inaysan wax qorin ama wax akhrin la arkey iyaga oo barta facebooga wax ku qoraya. Dadka qaar ayaa lagu haystaa inay barta facebooga soo galiyeen sawiro ku saabsan kulamo ay kala qaybgaleen odoyaal ama dad ka yimid deegaanka ay isku dhiibeen deegaan ka duwan. Halka uu qofka lacagta u diro iyo cida uu u diro ayaa kamid ah waxyaabaha lagu haysto dadka soomaaliyeed ee arintan yaabka badan ay qabsatay.
Arintan oo ah mid ugub ah oo aan horey nooceeda oo kale loo arag ayaa ah mid ka yaabisay dhamaan dadka maqlay, sidoo kalena abuuri karta in wel-wel ku abuurto soomaali badan oo aan information sax kusoo galin barta facebooga. Horey ayay Norwey u sheegtay in ay sharciyada kala noqonayso wadankiina dib ugu celinayso soomaalida laga shakiyo inaysan u baahneyn magangalyo maadaama ay xaalada amniga ee soomaaliya soo fiicnaatay?
Norwey waxaa ku dhaqan soomaali tiro ahaan gaarayso 40.100 00 31% ay yihiin dhalinyaro wadanka ku dhashay. Su aasha Iswaydiinta mudan ayaa ah maxay xildhibaanada soomaaliyeed ee sheegta inay matalaan soomaalida ku dhaqan wadanka ugu hadli la-yihiin go aanadan iska soo daba-noqonayo ee ku saabsan sidii dadka soomaaliyeed ee intooda badan magangalyada ku jooga wadanka loo hayi kicin lahaa. Xildhibaanada soomaaliyeed ee uu ugu horeeyaan Baashe muuse,Faadumo Cali Madar iyo Cabdulaahi Calason, maxay ilaa hada usoo istaagi la yihiin mediayaha wadanka si ay u gudbiyaan dareenka shacabka ay codkooda ku fadhiyaan goloyaasha deegaanka. Mise ayaga waxay haystaan dhalashada wadanka oo cidii la celin waxba kama quseyso, markii lagaar0 doorasho unbaa warkooda maqli doonaa, ayaga oo leh noo codeeya?.
Sidaan NorSom News horey u xaqiijinay waxaa Norwey kusoo wajahan Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaalia Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu casuumay sanadguurada xuska xarunta nabada ee Oslo senter. Jawaari waxa uu haystaa dhalashada Norwey, waana qof sifiican u yaqaan dhaqanka iyo luuqada Norweyba labadaba, sidoo kale wuxuu afartii sano ee ugu danbeeyay ka shaqeynayay Soomaaliya. Hadaba Jawaari sawir sax ah maka bixin doonaa Soomaaliya oo dowlada ma kala hadli doonaa arintan ku saabsan cabsi galinta shacabka soomaaliyeed nabadgalyada iyo nolosha ku haysta wadankan. Mise soomaalida Norwey ayaa inta xaflado u dhigto ayuu asna dhuuman doonaa.
Halkan ka dhagayso waraysiga nin kamid ah dadka ay dhibtu qabsatay oo u waramayay mid kamid ah warbaahinta soomaalida.
Previous article8 wiil oo qaar kamid ah ay soomaali yihiin oo lagu maxkamadeynayo Oslo.
Next articleCaptan Ciise Midnimo oo markale kasoo dhex muuqday horyaalka labaad ee Norwey.
Mohamed Ali Abokor
Arintaas oo kale aniga ayeey igu dhacday 11 sano ayaan hada laga marayaa